Tag: cabd pollitt | Martech Zone
Maxaad ula raaceysaa Adeeg Bixiye Codsi?
Isniin, February 4, 2008 Talaado, Febraayo 5, 2008 Douglas Karr
Waa caqabad in lala hadlo shirkad leh kayd xoog leh oo IT ah oo loo oggolaado inay wax ka iibsadaan nooca ASP. Dadka intooda badani waxay aaminsan yihiin in farqiga u dhexeeya ASP iyo shirkad softiweer leh ay tahay mid fudud in qofku sii daayo softiweer macmiilka si uu ula macaamilo kan kalena u sii daayo khadka tooska ah ee dalabku ka fudud yahay dayactirkiisa. Markaad u fiirsato warshadaha sidan, labadoodaba waxay u egyihiin sida shirkadaha softiweer. Taasi runti ma noqon karto